HS:-R/wasaaaha Soomaaliya oo tan iyo markii xilkaan loo magacaabay siyaasada Soomaaliya ku soo biiray iyadoo aysan u bilaawneyn horeyna u ahaa shaqsi iska dhaxbooda NGO-yada iyo wax uu ugu yeeray ganacsi ayaa hadane waxaad moodaa in ay wax badan iska bedeleen siyaasadiisa.
Bilaawgii siyaasadiisa waxuu la soo baxay firfircooni waxuuna aad u aaminsanaa fikirka ay Puntland aamin saneyd ee ahaa sidii ay Jubooyinka ula wareegi lahaayeen beesha Ogaadeen waxii ka qaldana dib loogu saxi lahaa si ugu danbeyn uu maamulkaas u noqdo mid ay gacanta ku hayaan beesha Daarood, arintaas waxey la socon waayeen arimo badan oo r/wasaaraha ku riday rajo beel waxaana waqti badan ka galay sidii uu dib u heshiisiin u dhax dhigi lahaa beesha Sade oo marka uu dhinac ka xaliyo qilaafkooda ay meel kale k aburqaneyso.
Waxaa kale oo iyaduna xusid mudan arinta kale ee ku dhiragelisay inuu maamulka Juba ka quusto kedib markii uu siweyn u dareemay in uusan maamulkaas u muuqan mid hanan kara Jubooyinka markii uu dhamaaday waqtigii ku meel gaarka ahaane waxaa uu r/wasaare Cabdiweli hada taageersan yahay qorshaha uu Bare Hiiraale ugula wareegayo gacan ku heynta Kismaayo Ahmed Madoobe taasi oo ay ka saacidayaan Amisom oo ku shaqeyneysa amarka dowlada dhex waxaadne ka garan kartaa Bare Hiiraale ma ahan dowlad hubka uu hada Kismaayo ku weerarayo waxaa ku baxay malaayiin dolar isweydii yaasiiyey?.
Maamulka Puntland iyo xaalkooda.
Cabdiweli Gaas oo siweyn u dareemay in ay siyaasada Soomaaliya ugu dhamaatay ayaa ku dhiiraday sidii uu Puntland madax ugu noqon lahaa dhawr safar oo uu ku tagay degaano Puntland ka tirsan iyo safaro dibada ah waxuu ugu danbeyn ogaaday in aan waqti badan lagu lumin Karin madaxtinimada Puntland isagoo dareensan sida gudaha Puntland looga fashilinayo siyaasadiisa.
Isagoo garan la sida uu wax yeelo ayaa mar uun dowlada dhexe afkeeda waxaa ka yimid Maamul goboleed ayaa loo sameynayaan Mudug iyo Galgaduud waxuuna isla markii madaama aysan aheyn siyaasada Puntland mid fadhisa oo miisaan leh danta kaliya loo dhisanay uu yahay dano qabiil waxuu ku dhawaaqay in ay dowlada dhexe xiriirka u jareen.
Sal fudedka reer Puntland aqoonyahan, Sargaal, siyaasi, xildhibaan, waasiir ilaa qurbajoog sidey u dhan yahiin waxaa arkey Soomaaliweyn iyagoo dowlada waanu ka baxnay leh ayuu ka dhacay qarax magaalada Bosaaso kedibna waxaa ku soo xigay ciidamo beeleed ayaa qabsaday TV-ka iyo Radiyaha Puntland kedibna maxaa dhacay?
Cabdiweli Gaas waxuu ku hanjabay inuu iscasili doono hadaan dhalinyaradaas Faroole ka amar qaata laga saarin xarunta si xaalada loo qaboojiyo waxaa arintii ku baxay odoyaal ka soo jeeday qabiilka Ciise Maxamud oo iyagu Garoowe degan hadana ciidamo u gaar ah ku heysta gudaha magaalada weyna ka saareen.
Xiligaas waxii ka danbeeyey xildhibaanadii Mogdishu ka tagay ee ay qaaday xamaasada qabiilka iyo maamulka Puntland ayaa is tusiyey in lagu deg degay xiriirka loo jaray dowlada dhexe waxeyna bilaabeen iney Mogdishu wacaan iskana dhigaan xildhibaano Puntland u tagay sidii ay xaalada u qaboojin lahaayeen dabcan waxey indhahooda ku arkeen hadii Soomaaliweyn laga dhax baxo in ay iyagu is gumaadayaan dharaar cad xalkana ku jiro sidii hore.
R/wasaare Cabdiweli maxuu doonayaa inta uusan Puntaldn tegin inuu maqlo?
R/wasaare Cabdiweli ma doonayo inuu Puntland booqdo ilaa ay mediyaha ka sheegto in ay ka noqdeen xiriirkii ay sheegeen iney u jareen xukumadiisa mana ahan naag la soo mehrinayo r/wasaaraha oo isagoo iska socda iskama tagayo Puntland waa in Soomaaliweyn la maqashiiyo in ay Puntland si iskeed ah ugu laabatay si mustaqbalka loo waayo maul goboleed dowlada dhexe sidan fudud ugu hanjabayo.
Puntland-ne waxey rabtaa in r/wasaare Cabdiweli yiraahdo Mudug qeyb ka mid ah ayaa maamul goboleed noqoneysa si ay caalamku midabka dhabta ah ee masuuliyiinta dowlada dhexe u arkaan iney yahiin kuwo maalinba meeshii ay tagaan waxey doonaan ka sheegaya maadaama r/wasaare Cabdiwel aduunyada oo arkeysa saxiixay Mudug oon la kala jarin in uu noqonayo State waxuuna doonayaa inuu telefon oo kaliya ku qanciyo reer Puntland dhawr maalmoodna booqdo madaxana u soo salaaxo maadaama uu yaqaano meesha laga maro Majeerteenka oo ah dad amaan been ah jecel.
Isku soo duuboo dhamaan maamul goboleedyadii dalka siyaabaha kala duwan loogu dhawaaqay ilaa hada wax ka soo muuqda ma jiraan meel waxaa taagan maamul 6 gobol ah oo looga dhawaaqay Baydhabo siyaasiyiin uu ka mid yahay Sheikh Aden Madoobe oo ka hadlay mediyahane waxuu yiri shacabka koofur galbeed inagaa siyaasiyiin u ah waxeyna dhisteen maamul 6 gobol ah, Maxamed Cabdi Afey oo Ahmed Madoobe oo ay isku qabiil yahiin dhul u raadinaya waxii uu doono nooma yeerinayo.
Dhinaca kale waxaa dhinac socda maamulkaas mid kale oo 3 gobol ah oo lagu soo dhoodhoobay Mogdishu gudigii la yiri wax hasoo dhisaano waxey ku kala biireen qilaafkii halkaas ka jiray weyna adag tahay iney xal keenaan waayo waxii fowdo ku bilaawda fowdo ayey ku dhamaadaan.
Maamulkii Juba waad aragtaan oo waxaa ka dhamaaday waqtigii kumeel gaarka ahaa ilaa hadana waxaa laga dhaxlay colaad oo waatan Kismaayo foolaneysa dagaalka. Gobolka Banaadir waxaa la yiri State ma noqon karo haduusan aheyn Banaadirtii la yaqiinay sida Mogdishu, Marko, Jowhar iyo Daafeed waliba murankiisa wuu taagan yahay oo waxaa is barbar socda Shabelle State iyo Banaadir waa Federal Zone xadkiisuna waxuu ku egyahay Jaziira ilaa Ceel Cirfiid.
Ilaa maanta dadka aan marnaba deg degin ugu danbeyna noqon doona maamul goboleed sax ah waa reer Hiiraan waayo gobolkaas oo horey loola galay bulshadiisa dagaal siyaasadeed ugu danbeyn goboladii la badiyey maanta waxba ma dhaaman oo waakuwa dib leys kugu darayo.
Waa macquul maadaama aan dalka Soomaaliya inuu dego la dooneyn iney madaxda hada jirta oo aan meel wax iskula wadin isku mashquuliyaan kaliya wax baan ku dhawaaqnay sidii dad aan xilkas aheyn laakinse federal fimkiisa waxuu soo afjarmayaa marka madaxda hada jirta afkooda laga maqlo Mudug waa labo qeybood kedibna dastuurkii ay awalba reer Puntland soo dhoodhoobteen oo hadane iyagii qiyaanadeey Soomaali badan oo ay reer Hiiraan ugu horeeyaan la damacsanaayeen dib ugu laabatay halkaas ayuu ku burburay waxeyna noqoneysaa hada kedib iyo dastuur cusub sidaan horeyba u sheegnay.
Waayo mar hadii Mudug oo ka mid aheyd 8dii gobol ee uGu horeysay lagu dhiirado iney kaliged labomaamul goboleed noqon karto oo qeybna la raacin karo gobolkii horey loo dhihi jiray Majeerteeniya maamntana loogu yeero Puntland yaa meel la soo istaagi kara Hiiraan oo ka mid aheyd 8dii gobol ee ugu horeyey kaligiis State ma noqonkaro????? reer Hiiraanow dad nasiib badan ayaad tahiin wax hada ka hor idiin dhaafay ma jirtee Soomaali badan xishoodkii iyo qaranimadii meel ayey iska dhigeen danhiina ka tashada intaad qaran qaran ku heysaan.
Qaran aan Soomaaliweyn ka maqneyn reer Hiiraan kaliya kama maqna dhawaane waxaan idiin tusin doonaa iyadoo Puntland la qancinayo kaliya hadal in ay madaxda dowladu dhihi doonaan Mudug waa labo qeybood kedibna.................
· admin on August 10 2014 14:56:06 · 0 Comments · 2722 Reads ·
14,362,054 unique visits